Ciidamada Al Shabaab oo Si Buuxda Ula Wareegay Gacan Ku Heynta Deegaanka Bariire.
Friday September 29, 2017 - 06:53:25 in Wararka by Super Admin
Waxaa Goordhow soo gaba gaboobay dagaallo culus oo saaka aroortii ka bilaawday deegaanka Bariire ee gobolka Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya deegaanka Bariire ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacanta ku heynta deegaanka iyo dhammaan Saldhigyadii ay ku sugnaayeen Maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee dowladda Mareykanku Tababaray.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska Ciidanka Xarakada Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamadoodu ay la wareegeen deegaanka Bariire, Al Shabaab waxay sheegtay in ciidamadoodu ay ghaniimeysteen 11 Baabuur oo 5 kamid ah yihiin kuwa dagaalka iyo gawaari kale oo isugu jirta Booyado iyo gawaari nuuca Ciidanka xambaara ah.
Goob Joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in Meydad farabadan ay daadsanyihiin saldhig melleteri oo ciidamo Mareykan ah dhowaan ka dhiseen agagaarka Buundada Bariire halkaas waxaa galay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay.
Sidoo kale dagaalyahan Kaxaynayay gaari Maadooyinka qarxa lagasoo buuxiyay ayaa gudaha ugalay saldhig kale oo maleeshiyaadka Soomaalida ku sugnaayeen, wadarta guud ee weerarada naf-hurnimo ee ka dhacay Bariire waa laba weerar.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Xoogaga Al Shabaab ay isku fidiyeen deegaanka ayna Calanka Madoow ee dhaxda ku leh kalimadda Towxiidka ka lalmiyeen dhammaan saldhigyadii laga Eryay Maleeshiyaadkii dowladda Mareykanka Tababaray.
Weerarkan ayaa yimid xilli shalay gelinkii dambe ciidamo Mareykan iyo AMISOM ah ay Bariire isaga baxeen ayna ku wareejiyeen Boqolaal maleeshiyaad ah oo lagusoo tababaray xeryaha Jaziira iyo Balidoogle, ciidamada saaka laga qabsaday Bariire ayaa Mareykanka kala qeyb galay xasuuqii dadka shacabka ah lagu laayay ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay Beeraha Bariire.